FAQ - Ek Ukukhanyisa Co., Ltd
LED headlight isibani
canbus led ukukhanya
SMD kwaholela isibani
Cree led ukukhanya
Ofihliwe isikebhe sizinze Xenon
efihliweyo ukuguqulwa ikhithi
Sine umkhiqizo ezahlukene (ephezulu umkhiqizo, maphakathi no-ekupheleni umkhiqizo kanye nomkhiqizo izindleko kahle) ukuze emakethe ezahlukene, sicela uxhumane nathi uma unentshisekelo kumkhiqizo.
Yebo, sidinga wonke ama-oda ngamazwe ukuba kuyingxoxo eqhubekayo ubuncane oda ubuningi.
Yebo, sinobufakazi ithimba eliqinile othuthukayo. Imikhiqizo kanye nokupakisha zingenziwa ngokusho isicelo sakho, futhi unga laser logo yakho kwimikhiqizo.
Ngokuvamile, siyaye sibe izinto in stock, ukulethwa isikhathi (angafaki iholide) ngokuvamile 2-3 izinsuku zokusebenza nge DHL / UPS / TNT / EMS. Uma i-oda yakho ezingaphezu kuka-100 amasethi, kuthatha izinsuku ezingu-7-10 ukulungiselela, lapho Qty oda amasethi ezingaphezu kuka-1000, kuthatha izinsuku 10-15 ukuqedela ukukhiqizwa, kwaphela iminyaka engaphezu Qty, pls ubuze yokuthengisa lwethu ngqo
Thina yesiqinisekiso zonke umkhiqizo wethu. Ukuzibophezela kwethu ukwaneliseka kwakho imikhiqizo yethu. Uma kukhona noma iyiphi inkinga izinga, sicela usithumelele izithombe noma amavidiyo, sizobe sihlaziye isizathu futhi ugweme le nkinga esikhathini esizayo, futhi uzokwenza esikhundleni entsha ukuze wakho olandelayo.
Yebo, ngaso sonke isikhathi ukusebenzisa izinga okusezingeni ukuthekelisa emaphaketheni.
Ikheli: Dehuigangwang Industrial Park, Wanggang Gongye 3rd Rd, Baiyun wesifunda, Guangzhou
Ifoni: + 86-020-87486122
Ifeksi: + 86-020-87486122
© Copyright - 2010-2018: EKLIGHT zonke Amalungelo Agodliwe.
EKLIGHT kuyinto nomkhiqizi professional LED headlight isibani, wayifihla ikhithi Xenon, auto kwaholela abantu abayizigidi, emini egijima ukukhanya, kwaholela umaka.